त्यस्ता देशद्रोहिलाई सक्छस्, मृत्यदण्ड दे होइन भने देश निकाला गर - inaruwaonline.com
त्यस्ता देशद्रोहिलाई सक्छस्, मृत्यदण्ड दे होइन भने देश निकाला गर
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष ०४, २०७२ समय: ९:०४:३६
ईन्द्रसरा खड्का । हामी महिला हिंसाको कुरा गर्दै गाउँ-गाउँ शहर-बजारतिर हिड्ने मान्छे नेपालमा पनि कम्ती छैनौ । थुप्रै अधिकारका कुरा गरेर पनि अहिले सम्म मञ्चमा भाषण गरीरहेका छौं, महिला हिंसाका बारेमा । महिलाको न्याएको बारेमा, महिलाको हक अधिकारका बारेमा । कस्तो नेपालको कानुन् र कस्तो नेपालको सरकार अहिले सम्म कसैले बुझनै नसकेको कुरा । एउटा महिला बिधवा भईसके पछि उसले यो समाजमा केहि पनि गर्न नपाउने कस्ले बनायो यो कानुन् ? नेपालको सविधानको कुन धाराको कति भागमा छ यस्तो कुरा ? यदि यस्तो कुरा कानुनमा उल्ल्ेख गरेको छैन भने किन कानुन बिपरीत कार्य गर्दा पनि कानुनी कार्बहि हुन सकेन ।
के नेपाल सरकार अन्धो छ ? हैन छैन अन्धो अनी, किन मौन एउटा पुरुषले आप्नो श्रीमती मरेको १५ दिन बित्न नपाउदै उसले समाजमा जे गरेर पनि स्वतन्त्र रुपमा हिड्न पाउने आफुले मनलागेको जुनसुकै कुरा पनि गर्न पाउने ।अनी महिलाले आप्नो श्रीमान गुमाएको बर्षौ दिनमा पनि उसैको पिडामा तड्पी तड्पी बाच्नु पर्ने, समाजमा उसले ठाडो शिर पारेर हिड्न नपाउने ? किन यस्तो भेदभाब महिला र पुरुषमा ? किन यस्तो हाम्रो समाज एउटा केटाले श्रीमती गुमाएको १० दिनमै अर्को केटी संग बिहे गर्दा नौमती बाजा बजाएर घरमा दुलही भित्रयाउने । महिलाले श्रीमान गुमाएपछि किन अलच्छीनी ? किन पापी ? किन टोकारी ? यस्तै थरीका बिभीन्न बचनहरु सहेर बस्न बाध्य हाम्रो देश नेपालमा महिलामाथी कति हिंसा छ भन्ने कुरा आज प्रस्ट हुदै छ । एउटा देशको मुख्यपदमा बसेर देशलाई हाकी रहेका मान्छेलाई समेत यस्तो हिंसा हुदा के ग्रामिण स्तरका कुरा गर्ने ? यसरी राष्टिपति बिद्या देबी भण्डारीलाई सार्बजनीक स्थलमै हिंसा हुदा मौन बसेको नेपाल सरकार के ग्रामिणस्तरका महिला हिंसामा परे न्याय दिन सक्ला र ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले देखाएको यो ब्याभार म भन्छु दानबले, राक्षसले गर्ने ब्याभार हो । यदि मानब तिनीहरु भईदिएका भए पक्कै पनि यस्तो ब्याभार हुन्नथ्यो होला । बिधुवा भण्डारीले जानकी मन्दीमा दर्शन गरेको भन्दै गंगा जलले छर्केर पखाल्नु यो कत्तिको अपमान हो ? तपाई आफै पनि बिचार गर्न सक्नु हुन्छ ?
नेपाल पुरुष प्रदान देश हो पितृसतात्मक सोचका कारण महिलामाथी हिंसा बढिरहेको छ सबै भन्छन् । हुन त नेपालमा सतिप्रथा पनि थियो यो पनि नभएको हैन । श्रीमान मर्दा श्रीमानसंसंगै आफुले पनि जिउदो जलेर मर्नुपर्ने बाध्यता थियो देशमा यो कहिानी पनि हामीले सुनेको नै हो । अब त्यहि हर्कत देखाउन थाले मधेशबादी दलहरु । हुन त यसरी मधेशबादी दलहरुलाई मैले कुनै गाली गलौज गर्न खोजेको हैन ? तर साच्चै तपाईहरुले देखाएको यो हर्कत एउटा राक्षसले गर्ने कार्य हो । यो चाही मेरो कमले लेख्नै पर्ने शब्द हो । यसो भन्दा तपाई गाली गरेको लाग्न सक्छ मधेशबादी दलहरुलाई तर तपाईको ब्याभारलाई गाली गरेको हो मेरो कलमलल, मेरो हातले । राष्ट्रपति भण्डारीले मन्दीरमा दर्शन गरीसकेपछि फर्केको भोलीपल्ट बिहिबार मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले विधवाले मन्दिर टेकेर अपवित्र तुल्याएको भन्दै ‘गंगाजल’ ले मन्दिर पखाले यो के तिनीहरुले गर्ने मानबिय ब्याभार हो ? अनी कसरी दानबिय ब्याभार भएन यो कार्य अब तपाई आाफै भन्नुस के गाउघरका हिंशामा परेका दिदीबहिनीहरुले न्या पाउन सक्लान । हिंसा परेपनि कहा जाने न्या माग्ने यस्तो गरीमामय पदमा बसेर देशलाई चलाउने राष्ट्रिपति बिद्यादेबि भण्डारीलाई बिधुवा भनेर यत्रो अपमान गर्दा समेत मौन बसेको यो सरकारले कहाबाट दिनसक्छ ग्रामिण स्तरका महिलालाई न्याय हो । कारण यहि हो समाजमा महिलाले आत्महत्या गर्नु पर्ने बाध्यता । समाजमा पनि यस्तै थुप्रै घटन्हरु हुने गर्छन महिलालाई एकातिर आप्नो श्रीमानले आफु संगको जिबन साथी सदाको लागी छोडेर जादाको पिडा, एउटा समाजले बिधुवा भनेर हेर्ने दृष्टीकोण, अर्कोतिर यस्तो अपमान अन्त्यमा जिउने बिकल्प नै नपाएर आत्महत्या गर्न बाध्यहुन्छन नेपालका नारीहरु हिंसा त कति प्रकारका हुनछन किती तर के गर्नु सहन बाध्य हुनै परयो । न्याय पाउने ठाउ नभए महिला अधिकारकर्मि भन्छन् । हामी महिलाको हक अधिकारका बारेमा सदैब लागी रहन्छौ । महिला हिंशाको अन्त्यका लागी भन्दै लैगीक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान पनि नपालमा नचलाएको हैन यो अभियानको समापन संगै नेपालमा नेपालको राष्ट्रिपति माथी यत्रो हिंसा मलाई लाग्छ यो अभियानले हिंसा न्युनिकरण हैन झनै निम्तयाउन सहयोग गर्छ जस्तो ।
घटनाका अगूवा सरोज मिश्रले ‘पापी, हत्यारिणी, राक्षसनी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्दिरमा आफ्नो पापले भरिएको खुट्टा राख्दा मन्दिर अपवित्र भएको भन्दै श्रद्धालूहरुले दिएको पवित्र गंगाजल छर्केर मन्दिरलाई पूर्ण पवित्र बनाइएको हो ।’ यो एउटा बिधुवालाई भन्नु कहा सम्मको अपमान हो कहासम्मको हिंसा हा । राष्ट्रपति भण्डारी विवाहपञ्चमी महोत्सवमा सहभागी हुन बुधबार जानकी मन्दिरमा पुगर दर्शन गर्दैमा कसरी अलच्छिनी भईन । कसरी ? यो मेरो प्रश्न सरोज मिश्रलाई यस्तै प्रदिप झा नामका एक सरकारी शिक्षकले फेसबुकमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग गर्दा तथानाम गाली गरेका छन् । यस्तो लेख्दासम्म उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको उनको टिप्पणी यस्तो छ, ‘यसपालीको विवाह पञ्चमीको रौनक अलच्छिन विधवा देवी भण्डारीले समाप्त पारिन् । ठिकै भनिन्छ कि शुभ कार्यमा अलच्छिन र विधवालाई उपस्थिति हुनु हुँदैन । यहाँ त एउटै महिलामा दुवै गुण थियो ।’ यस्तो लेख्दासम्म पनि खोई केहि गरेको उनलाई हुन त नेपालमा ‘साइबर कानून’ नामको कानून क्रियाशील छ । यो कानून के ठूलाबडाले आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिहरुलाई फसाउनका लागि मात्रै बनाइएको हो ?
अनी कसरी भईन राष्ट्र बिद्यादेबि भण्डारी अलच्छिनी ? जानकी मन्दीरमा दर्शन गर्देमा कसरी भयो त्यो मन्दीर अपबित्र ? त्यहि महिलाले जन्माएका पुरुषहरुले मन्दीमा गएर पुजा गर्दा कुनै हानी नोक्सानी नहने उनीहरुले गएर दर्शन गर्न हुने ? अनी किन यस्तो महिला बिधवाहुदैमा यति अपमान ? कि त यसको जवाफ माग्नु परयो नभए यस्ता अपराधीहरुलाई कानुनको मट्घरामा उभ्याएर सजाए दिनैपर्छ । यो आज त राष्टपति भण्डारी त्यो ठाउमा गएर दर्शन गर्दा यस्तो अपमान गरयो । भोली त त्यही मन्दीरमा बिधुवा महिलाले दर्शन गरे उनिहरुको बली नचढउदान भन्न सकिदैन मधेशीहरु । देशमै यस्तो उदण्ड मच्चउने तिनीहरु जस्ताले आपने गाण्ठाउमा भएका बिधुवा महिलाहरुलाई कुन दृष्टीकोणले हेरेका होलान् ।
सरकार राष्ट्रपतिलाई बिधुवा भन्दै अपमान गर्ने औकात नभएका यस्ता ब्क्तीहरुलाई सजाय दे सरकारले राष्ट्र प्रमुख महिलालाइ त्यति अपमान गर्दा सम्म किन मुख बन्द गरेर हेरीरहेको छ ? राष्ट्रको उच्च पदमा बसेकि महिला माथि यसरी हिंसा भएको देख्दा देख्दै मुख खोल्न नसक्ने सरकारबाट कुना कन्दराका महिलाहरुले के न्यायको आश गर्ने ? त्यस्ता देशद्रोहिलाई सक्छस मृत्यदण्ड दे होइन भने देश निकाला गर त्यस्तो गरे मात्र मिहीलाहरुले आफु हिंसाबाट मुक्त भएको ठान्ने छन् ।